राष्ट्रिय सम्मानका साथमा डा भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको अन्त्येष्टि – Allindiabc
Home/ताजा खबर/राष्ट्रिय सम्मानका साथमा डा भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको अन्त्येष्टि
राष्ट्रिय सम्मानका साथमा डा भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको अन्त्येष्टि
सातौँ सङ्घनायक डा भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीर अग्गमहापण्डितको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ । नेपालको थेरवादी बौद्ध जगतका शिखर व्यक्तित्व भिक्षु ज्ञानपूर्णिकको ललितपुरस्थित शङ्खमूल घाटमा आज बौद्ध परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरिएको हो ।
स्व भिक्षु ज्ञानपूर्णिकलाई कार्यवाहक सङ्घ नायक भिक्षु बोधिसेन महास्थवीर र अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्थवीरले दागबत्ती दिएपछि उनका आफन्तजन श्रीदेवी गुभाजु, प्रदीप बज्राचार्य र रम्भा शाक्यले अग्नी संस्कार गरेको भिक्षु निग्रोधले जानकारी दिए । अग्नि संस्कारअघि उनको पार्थिव शरीरमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ओडाएका थिए।
सो अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले स्व भिक्षु ज्ञानपूर्णिकलाई सम्मानस्वरुप सलामी अर्पण गरेको थियो । उनको अन्त्येष्टिमा सांसदहरु सुजिता शाक्य, बीना श्रेष्ठ र शोभा शाक्य, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलगायत सहभागी थिए ।
भिक्षु ज्ञानपूर्णिकले बुद्ध धर्मबारे ६० भन्दाबढी किताब लेखेका छन् । उनि धर्मोदय महासभाको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थिए। उनले थाइल्याण्डको महाचुलालोङ्कर्न विश्वविद्यालय र महामुकुट विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्यावारिधि प्राप्त गरेका थिए। भिक्षु अग्गमहापण्डित थेरवाद बुद्ध धर्मको सातौँ सङ्घनायकसमेत थिए । बुद्धधर्मसम्बन्धी दर्जनौँ ग्रन्थ उनले नेपाल भाषा, नेपाली र अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेका छन्।
भिक्षु ज्ञानपूर्णिकको जन्म १९९६ साल मङ्सिर ६ गते पाल्पाको तानसेनमा बुबा सूर्यलाल शाक्य र आमा चन्द्रमाया शाक्यको कान्छो छोराका रुपमा भएको थियो । भिक्षु हुनुभन्दाअघि उनको नाम हिरालाल शाक्य थियो । उनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयअन्तर्गतको थेरवादी बौद्ध एकेडेमीको संरक्षक र संस्थापक अध्यक्षसमेत थिए।
चर्चित गायिका अन्जु पन्तको आज जन्मदिन परेको छ । उनले आज आफ्नो ४३ औ जन्मदिन मनाउदैछिन् । जन्मदिनको अवसरमा उनलाई लागेको छ ।
‘न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई’ गितले रातारात हिट भएकी गायिका अन्जु पन्तले आज आफ्नो जन्मदिन घरमै परिवारसँग मनाउदैछिन् । गएको बर्षको जन्मदिन मनाउदै गर्दा उनले एउटा गित रेकर्डीङ्ग गराएकी थिइन् । तर अहिले भने कोरोनाका कारण गीतका कामहरु रोकिएका छन् ।
अन्य समाचार, काठमाडौं। रोजगारीका लागि विदेश गएका ९० नेपालीले अन्तिम समयमा पनि मातृभूमिको माटो पाएनन्। उनीहरुको शवको विदेशमै अन्तिम संस्कार गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली कामदारको विभिन्न कारणले मृत्यु भएकोमा ९० नेपालीको शव स्वदेश नल्याइ उतै व्यवस्थापन गरिएको हो।
यद्यपि यसरी व्यवस्थापन गर्नको लागि मृतकका परिवारले भने सहमति दिएका छन्। कारणवश शव नेपाल ल्याउन नसकिने स्थिति भएमा शवको उतै व्यवस्थापनको लागि परिवारले सहमति दिनुपर्ने प्रावधान छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार यसरी सहमति पाएका शवको उतै अन्त्येष्टि गरिएको छ।
अहिले लकडाउनका कारण विदेशबाट शव नेपाल ल्याउन पनि समस्या भइरहेका कारण शव विदेशमै व्यवस्थापन गरिएको हो। यीमध्ये केही कोरोनाभाइरका कारण मृत्यु हुनेहरु पनि छन्। कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएकाको शव त नेपाल ल्याउनै मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुनेको शव निश्चित प्रोटोकल अपनाएर निश्चित समयभित्रै व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
‘लकडाउनका कारण विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउन समस्या भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले डिसी नेपालसँग भने, ‘लकडाउनका कारण नियमित उडान नहुँदा विदेशबाट शव ल्याउन समस्या भइरहेको हो।’
लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको र कतिपयको कोरोनाका कारण मृत्यु भएका कारण पनि विभिन्न मुलुकमा मृत्यु भएका ९० नेपालीको शव सम्बन्धित मुलुकमै अन्त्येष्टि गरिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।वैदेशिक रोजगार बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीमध्ये २३ जनाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । विदेशमा शव अन्त्येष्टि गर्दा परिवारजनको सहमति भने लिने गरिएको छ।
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव ७२ घण्टाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शवलाई सम्बन्धित मुलुकले नै व्यवस्थापन गर्ने भएकाले उनीहरुको शव नेपाल ल्याउन सम्भव हुँदैन। ती बाहेक विभिन्न मुलुकमा अझै १५१ नेपालीको शव अलपत्र छन् जसलाई नेपाल ल्याउन समस्या भइरहेको छ। लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि उनीहरुको शव नेपाल ल्याउन समस्या भइरहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शवलाई सम्बन्धित मुलुकले नै ७२ घण्टाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘कोरोना संक्रमण र अन्य कारणले मृत्यु भएका ९० नेपालीको शव परिवारको सहमति लिएर सम्बन्धित मुलुकमै अन्त्येष्टि गरिएको छ।
अन्य समाचार, नारायणी सामुदायिक अस्पताल भरतपुरमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सोमबार साँझ भरतपुर अस्पतालमा सारिएका एक बिरामीको निधन भएको छ । उनको आज बिहान ७ः०५ बजे निधन भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ ।
अन्य समाचार,काठमाण्डौ – कोरोनाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा विदेशमा रोकिएका शव साढे दुई महिनापछि ल्याउन थलिएको छ । यूएईबाट शुक्रबार घर फर्कने नेपाली आएको चार्टर्ड जहाजले एउटा शव ल्याएसँगै विदेशमै रोकिएका शव ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
अहिलेको समयमा चार्टर्ड जहाजमार्फत शव आउँदैछ र परिवारलाई कम्पनीले जानकारी दिएको छ भने विमानस्थलदेखि घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थापनका लागि बोर्डमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यसका लागि दिनबन्धु सुवेदी, आशिष भण्डारी र मैया कँडेलको मोबाइल नम्बर ९८४१५०७८९८, ९८५५०३२२८८ र ९८५११८५१८६ मा सम्पर्क गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । ,साभार : उज्यालो नेटवर्क
अन्य समाचार, नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट थप एक जनाको निधन पुष्टि भएको छ। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ घर भएका ५८ वर्षीय एक पुरूषको निधन पछि स्वाब परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको हो।
लामो समयदेखि द’मका रोगी उनी सुर्खेतबाट डोल्पा फर्कने क्रममा बाटोमै मौ’रे भन्ने ठाउँमा ग’म्भीर बिरामी परेका थिए । १८ गते डोल्पा पुगेपछि उनको आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो ।
आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर लगिएका उनको २० गते निधन भएको थियो । निधन पछि संकलन गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना सं’क्रमण पुष्टि भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति नि’कालेर ती पुरूषको स्वाब परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको उल्लेख गरेको छ।
योसँगै कोरोनाबाट निधन हुनेको संख्या नेपालमा १२ पुगेको छ। निधन भएको दुई दिनपछि उनको स्वाब परीक्षण गर्न प्रतिष्ठानमा पठाइएकोमा शनिबार पोजेटिभ रिपोर्ट आएको हो।
त्यस्तै चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालको आईसीयूमा एक युवकको निधन भएको छ । माडी नगरपालिका ६ कल्याणपुरका २७ वर्षीय पुरुषको शनिबार बिहान निधन भएको हो । शुक्रबार दिउँसो भरतपुर अस्पतालको कोभिड आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । उनि २ हफ्ता अगाडी भारतबाट आएको खुलेको छ । उनलाई जो’रो र खो’कीको स’मस्या आउँदा निकै गा र्हो भएपछि भरतपुर अस्पतालको कोभिड आ’ईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । उनको केहीबेर अघि मात्र निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
झण्डै २५ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका उनमा द’मको रो’गसमेत रहेको बुझिएको छ । मृतकको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी धनगढी प्रयोगशालामा पठाउने र शव व्यवस्थापन गरी परिवारलाई जिम्मा लगाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेले बताए ।
कर्णालीका सात जना कोरोना जितेर घर फिर्ता कर्णाली प्रदेशका सात जना कोरोना सङ्क्रमित उपचारपश्चात् शुक्रबार घर फर्केका छन् । कर्णाली प्रदेशमा अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गराइरहेका उनीहरु कोरोना जितेर घर फर्केका हुन् ।
पुनः परीक्षणपश्चात कोरोना भाइरसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरुलाई घर फर्काइएको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका कोरोना रोग सम्पर्क व्यक्ति डा केएन पौडेलले जानकारी दिए । कोरोना रोग निको भएर घर फर्कनेमा दैलेख महाबु गाउँपालिकाका एक र छ जना सुर्खेतको रहेका छन् ।
कोरोनामाथि जित हासिल गर्नेहरुमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ धारापानीका १६ वर्षीय उमेश कठायत, वडा नं ३ तातापानीका २६ वर्षीय यामराज सोनी, वडा नं ८ का १७ वर्षीय लक्ष्मण राना, वडा नं ४ का ३७ वर्षीय धनबहादुर बस्याल, वडा नं ९ लाटीकोइलीका ११ वर्षीय रमेश सुनार र महाबु गाउँपालिका–१ दैलेखका २६ वर्षीय दीपक सावन रहेका छन् ।
एक महिलाको नाम र ठेगाना नखुलेको अस्पतालले जनाएको छ । कर्णालीमा शुक्रबारसम्म ४८९ मा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने दुई जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण निधन भइसकेको छ ।
कतारबाट थप १५३ नेपाली स्वदेश फर्किए
उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई दियो झट्का
दोलखा भिमेश्वरको शिलामा पसिना आयो, स्थानीयको भीड (8,638)
सात दिन भित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ। ॐ लेखि सेयर गरौं (7,583)
भाग्यमानीले मात्र देख्ने सुन रङ्गको नाग देवतालाई देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुनेछ !!! (6,576)
यी ३ काम गरेमा धरमा सधैं लक्ष्मीकाे बास हुनेछ ! (4,051)
यी ५ चिज सिरानी मुनी राख्नुहोस् धन लाभ हुनेछ (3,921)